Tue, Jul 14, 2020 at 12:08am
राजनीतिक झड्का लागेपछि सिद्धू पुगे वैष्णो देवीको दरबार, हप्तौंदेखि तपस्यामा लीन
चण्डीगढ, २६ असार । पञ्जाबका मुख्यमन्त्री क्याप्टेन अमरिन्दर सिंहसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएसँगै पञ्जावका क्याबिनेटमन्त्री तथा पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्दू अहिले आफ्नै राज्यबाट गायब छन् । यसैबीच, आफ्नो बिभाग समेत फेरिएपछि सिद्धू अहिले वैष्णेदेवी माताको शरणमा पूगेका छन्, जहाँ उनी अहिले ८ दिनदेखि तपस्यामा लीन छन् । यसक्रममा उनी न कसैसँग भेट गर्न मान्छन् त न आफ्नो तस्वीर नै अर्कालाई लिन..
छात्रामाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका शिक्षक धरौटीमा रिहा
सप्तरी, २६ असार । बाल यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका सप्तरीका दुई शिक्षक बिहीबार धरौटीमा रिहा भएका छन् । सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नन्दकिशोरप्रसाद यादवको आदेशमा सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिका–१० का ४० वर्षीय पशुपतिकुमार यादव र सिरहा लहान नगरपालिकाका ३५ वर्षीय रामकृष्ण यादव जनही रु ६५ हजार धरौटी राखी पुर्पक्षका लागि रिहा भएको अदालतले जनाएको छ । सप्तरी जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार दिलकुमार वर्देवाका..
फेरि थुनियो महानगरको ढल, महामारी फैलिने त्रास
काठमाडौँ, २६ असार । काठमाडौं महानगरपालिका र वडा कार्यालयले बागदरबारस्थित ढल निकासका लागि गरेको प्रयत्न असफल भएको छ। ढल थुनिँदा फेरि महानगरपालिकाको कार्यालय रहेको भवन र चाइना टाउनको भुइँतला फेरि डुबानमा परेको छ। महानगरपालिका र वडा कार्यालयले ढल निकासका लागि सोमबार डोजर लगाएर केन्द्रीय कारागारका प्रहरी बस्दै आएको दुईकोठे भवन भत्काएका थिए। भवन भत्काएपछि डोजरले खनेर ढलको पानीलाई निकास दिइएको थियो। तर..
श्रीमती बोकेर दौडिने प्रतियोगिता, जित्नेले पाउँछ यस्तो अनौठो पुरस्कार
काठमाडाैं, २४ असार । विश्वमा अनाैठा-अनाैठा प्रतियाेगिता हुँदै आएकाे कहिले काँहि सुनिने गरिन्छ । जसमध्ये फिनल्याण्डकाे आफ्नै पत्नीलाई काँधमा बोकेर दौडिनुपर्ने प्रतियोगिता हाे। फिनल्याण्डमा आफ्नै पत्नीलाई काँधमा बोकेर दौडिनुपर्ने प्रतियोगिता हुँदै आएकाे छ। अझ यस्तो प्रतियोगितामा पहिलो हुनेले आफ्नै पत्नीको जिउको वजन बराबरको वियर पुरस्कारको रुपमा पाउँने गरेकाे छ । फिनल्याण्डको सोन्काज्भीमा सन् १९९२ हरेक वर्ष यो प्रतियोगिताको आयोजना गरिँदै आएको छ । गत शनिबार सम्पन्न यो वर्षको प्रतियोगितामा..
अविवाहित अभिनेत्रीकी ३ वर्षीया छोरी !
काठमाडौँ, २४ असार । अविवाहित बलिउड अभिनेत्री माही गिलले आफ्नी तीन वर्षकी छोरी रहेको खुलासा गरेकी छन्। ४३ वर्षीया उनले आफू लामो समयदेखि प्रेमसम्बन्धमा रहेकोसमेत जनाएकी छन्। ‘मेरो एक छोरी पनि छिन्, जसको नाम बेरोनिका हो। अगस्टमा उनी तीन वर्ष हुनेछिन्।’ उनी गोवाको एक व्यवसायीसँग प्रेममा रहेको बताइएको छ। माहीले छोरीको प्रसंगबारे आफूले मिडियासँग कुरा लुकाएर राखेको र छोरीलाई सामाजिक सञ्जालबाट पनि..
काठमाडौँ, २४ असार । महिलालाई अशक्त र अवला देख्ने पितृप्रधान समाजले प्राविधिक क्षेत्रमा महिलाको कुन स्तरसम्मको सफलता अपेक्ष गर्ला ? यस प्रकारको सफलतामा एक नेपाली महिलाले विकसित मुलुकका पुरुषहरुलाई समेत पछाडि पारेकी छन् भन्दा कतिलाई पत्यार लाग्ला ? डा. गुञ्जना शर्मालाई भेटेपछि सबैले यस सत्यलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । किनभने उहाँ विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको अत्यन्त सुरक्षा संवेदनशील मानिएको ह्यूज रिसर्च ल्यावोरेटोरिज (एचआरएल)मा..
डाइपरमा सुन लुकाएर ल्याउँदै गर्दा विमानस्थलका प्रहरीले देखेपछि ...
काठमाडौँ, २२ असार । बालबालिकाले प्रयोग गर्ने डाइपरमा सुन राखेर ल्याउँदै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आइतबार एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उक्त घटनामा सुन लिन आउने थप दुुई जनासमेत पक्राउ परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । कतारको दोहाबाट हिमालयन एयरलाइन्समार्फत नेपाल आउँदै गरेका मोरङ्गका लिलाबहादुर बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुुभयो ।..
काठमाडाैं । जीवन अनिश्चित छ अनि मृत्य अवश्यम्भावी। जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि मृत्यु मानिसका लागि असह्य पीडाको कुरा हो। चिकित्सा क्षेत्रले मृत्युलाई प्रमाणित गर्ने केही आधारहरु तयार गरेको हुन्छ। तर, मृत्यु प्रमाणित गर्न स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकले परीक्षण गर्नैपर्छ भन्ने छैन। सामान्यतयास् पाँच मिनेटभन्दा बढी समयसम्म शारीरिक वा मानसिक प्रतिकृया नदेखिएमा व्यक्तिलाई मृत भनिन्छ। विशेष परिस्थितिमा बाहेक पाँच मिनेटभन्दा बढी..
वन कार्यालयले दियो चितुवाको आक्रमणबाट घाइते भएकालाई २ लाख
राँझा, २१ असार । डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले चितुवाको आक्रमणमा परी घाइते भएका बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–३ धौलागिरीका दीपबहादुर श्रीसलाई राहतस्वरुप रु दुई लाख सहयोग गरेको छ । नेपाल सरकारको वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहतकोषअन्तर्गत उक्त रकमको चेक घाइते श्रीसलाई प्रदान गरिएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका डिभिजन वन अधिकृत मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो । वन्यजन्तु गाउँ बस्तीमा पसेर कुनै पनि मानवलाई आक्रमण गरी सामान्य घाइते बनाए..
उडिरहेकाे विमानभित्र मोबाइलको पावर ब्यांक पड्किएपछि...
शुक्रबार, आषाढ २०, २०७६ साल
वासिङ्टन, २० असार । अमेरिकामा उडेकाे एउटा विमानभित्र मोबाइलको पावर ब्यांक पड्किएकाे छ । उडिरहेकाे विमानभित्रै पावर ब्यांक पड्किएपछि भर्जिन एटलान्टिकको विमान आकस्मिक अवतरण गरिएको हाे । बिहीबार राति न्युयोर्कबाट लन्डनका लागि उडेको बिमानमा पावर ब्यांक पड्किएको थियो। बोस्टोन लोगान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विमानले उडान भरेको थियो। जहाँ २१७ जना यात्रुहरु चढेका थिए। प्रहरीका अनुसार विमानमा मोबाइलको पावर ब्यांक पड्किएको हो। घटनापछि सबै सुरक्षित छन्। विमान अवतरण..
काठमाडौँ, २० असार । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको समायोजनपत्र लुकाइदिएपछि एक कर्मचारी बिलखबन्दमा परेका छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ लगनखेलका प्रशासन शाखाबाट समायोजनपछि ललितपुर महानगरपालिका पुगेका युवराज सैंजुको समायोजनपत्र गायब भएको हो। सैंजु हाजिर हुन दैनिक महानगरपालिका धाइरहेका छन्। असार १ गतेदेखि। यसबीच मेयर चिरीबाबु महर्जन र उपमेयर गीता सत्याललाई जानकारी गराइसकेका छन्। ‘मेयरले बैठकपछि केही निर्णय होला भन्नुभयो’, सैंजुले भने,..
फिक्कल, १९ असार इलाममा उत्पादित छुर्पी अमेरिका निर्यात हुन्छ, मानिस हैन कुकुरका लागि । विदेशमा कुुकुर हेर्न मान्छे राख्ने चलन छैन । उसलाई भुलाएर राख्न छुर्पी राखिदिन्छ जुन ऊ घण्टौं चपाएर बस्छ । यसबाट घर फोहर हुँदैन । महिनामा करोडौँ रुपैयाँ मूल्य बराबरको छुर्पी अमेरिका निर्यात हुने गरेको बताइन्छ । कुकुरले खाने छुर्पीमा फ्याट नहुने तर, प्रोटिन मासुमा भन्दा बढी हुने यहाँका..
किन दुबईकी राजकुमारी 'हाया' भागेर लण्डन पुगिन् ? यस्तो छ रहस्य !
बीबीसी सुरक्षा संवाददाता १९ असार । दुबईका शासक शेख मोहम्मद अल मकतुमकी एक श्रीमती राजकुमारी हाया बिन्त अल-हुसेन लण्डनमा लुकेर बसिरहेकी बताइएको छ। आफ्ना श्रीमानलाई छोडेर भागेपछि उनको ज्यान खतरामा परेको त्रासमा रहेको बताइएको छ। शेख मोहम्मदले आफ्नो इन्स्टाग्राममा एउटा आक्रोशपूर्ण कविता पोष्ट गर्दै एक अज्ञात महिलामाथि धोखा दिएको र विश्वासघात गरेको आरोप लगाएका छन्। जोर्डनमा जन्मेर ब्रिटेनमा पढेकी ४५ वर्षीय हायाले सन् २००४ मा..
लिबिया आक्रमणमा एक नेपालीसहित ४० को मृत्यु
काठमाडौँ, १९ असार । लिबियाको राजधानी त्रिपोलीनजिकै रहेको एउटा आप्रवासी बन्दी गृहमा लक्षित बम विस्फोटमा परि एक जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । गत मंगलबार राति भएको बम विस्फोटमा परि २७ वर्षीय सन्तोष श्रेष्ठको मृत्यु भएको इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । ४० जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणमा घाइते भएका श्रेष्ठको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु राजदूताबासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा..
खासमा यस्तो रहेछ ‘सिरिन्ज आक्रमण’को रहस्य
काठमाडौँ, १९ असार । सीतापाइलाकी सीता महर्जन (नाम परिर्वन) स्कुटीमा धोबीघाटतर्फ जाँदै थिइन् । कलंकीमा एक महिलाले लिफ्ट मागिन् । स्कुटर रोकिन् । चढाएर गन्तव्यमा पुर्‍याइन् । खुसी हुँदै ती महिलाले महर्जनको कुममा धाप मारिन् । ‘थ्यांकस्’ भन्दै आफ्नो बाटो लागिन् । उनी जब कार्यालय पुगिन् तब, बाटोमा लिफ्ट लिएकी महिलाले धाप मारेको ठाउँमा अनायसै दुखेको महसुस गरिन् । सञ्चार माध्यम..
प्रहरीले भेटाउन नसकेका श्रीमान टिकटकले भेटायाे
तमिलनाडु, १८ असार । भारतमा प्रहरीले खाेजी गर्न नसकेकाे एक व्यक्तिलाई टिकटकले फेला पारेकाे छ दक्षिण भारतकाे तमिलनाडुबाट हराएका उक्त व्यक्ति टिकटकका माध्यमबाट भेटिएका हुन्। सन् २०१६ देखि आफ्नो पत्नी जया र आफ्नो दुई छोरालाई छोडेर घरबाट निस्केका सुरेश तीन वर्षपछि टिकटकको भिडियोमा भेटिएका छन् । आफ्नो पत्नी र परिवारले पुलिसमा उनलाई हराएको भनेर रिपोर्ट गरेका थिए । घर छोडेर हिँडेका उनलाई आफ्नो..
मुस्लिम सांसद सिन्दूर र मंगलसुत्र लगाएर बैठकमा उपस्थित भएपछि...
कोलकाता, १८ असार । भारतमा एक मुस्लिम सांसदले सिन्दूर र मंगलसुत्र लागाइन्। भारतमा त्रिणमुल पार्टीको तर्फबाट सांसद बनेकी मुस्लिम समुदायकी युवती नुसरत जहाँले सिन्दूर र मंगलसुत्र लगाएपछि उनीबारे विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेकाे छ । हालै उनले लगाएको सिन्दूर र मंगलसुत्रबारे पनि धेरै आलोचना र समर्थन पनि भयो । ती टिप्पणीको हालै उनले जवाफ दिएकी छन् । संसद बैठकमै मंगलसुत्र र सिन्दूरमा संसद बैठक पुगेकी थिइन्..
उडिरहेको प्लेनबाट खसेर एक जनाको मृत्यु
बेलायत, १८ असार । उडिरहेको प्लेनबाट खसेर एक जनाको मृत्यु भएकाे छ। बेलायतमा हिथ्रो विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा रहेको केन्या एयरलाइन्सको विमानबाट एक यात्रुको खसेर ज्यान गएको हाे । उनी विमानको ल्याण्डिङ गियरभित्र लुकेर यात्रा गरिरहेका थिए। विमान अवतरणको क्रममा ल्याण्डिङ गियर खोलेपछि उनी तीन हजार ५ सय फिट माथिबाट जमिनमा खसेकाे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएकाे छ। दक्षिण लन्डनको आवासीय क्षेत्रमा रहेको एउटा घरको बगैंचामा ती..
बाघको जुँगा उखेल्नेलाई ५ देखि १५ लाखसम्म जरिवाना
राजापुर, १८ असार मरेको बाघको जुँगा उखेल्नुलाई परम्परागत नेपाली समाजमा पुरुषार्थ मानिँदैन । तर वातावरण सचेत आधुनिक राज्यमा त्यो विषय महङ्गो पर्छ । बर्दिया जिल्ला अदालतले हालैको आफ्नो फैसलामा यसको पुष्टि गरिएको छ । गेरुवा गाउँपालिका–४ शान्तिपुर धकनिया निवासी सुन्दरलाल चौधरीले मरेको बाघको जुँगा उखेलेर घरमा लुकाएको आरोपमा रु पाँच लाख जरिवाना तिर्नुपरेको छ । उनलाई बाघ मारेको आरोपसमेत लगाई पक्राउ गरिएको..
मुस्ताङ, १७ असार । मुस्ताङमा ७ सय वर्ष पुरानाे मानव खप्पर फेला परेकाे छ । खानेपानीको पाइप र विजुलीको तार अड्याउन पोल खन्ने क्रममा मुस्ताङको लोमन्थाङ वरिपरि लगाइएको पर्खालभित्र मानव खप्पर भेटिएको हाे। लोमन्थाङको सुरक्षाका लागि लगाइएको पर्खालको गेट हुँदै खानेपानी र विजुली लोमन्थाङभित्र लैजाने क्रममा मानव खप्परसहित केही हड्डी भेटिए। स्थानीयवासी टासी गुरुङका अनुसार, पर्खालसँगैको जमिन खन्ने क्रममा सोमबार ३ फिट मुनि..
अचम्मका प्रेम जाेडी, जाे पिउँछन् एक अर्काकाे रगत
एजेन्सी। प्रेमी-प्रेमिकाले एक अर्काको जुठाे खानु, चुम्बन गर्नु सामान्य मानिन्छ। तर, संसारमा यस्ता पनि प्रेम जाेडी छन्, जाे जाे एक अर्काकाे रगत पिउँछन्। सुन्दा अचम्म लाग्ने याे कुरा सत्य हाे। सुन्दैमा झसङ्ग भइने यो सत्य घटना इटालीको हो । इटालीका ती ब्वायफ्रेण्ड र गर्लफ्रेण्डले एक अर्काको रगत पिउँदछन्, जसकाे कारण निकै अनौठो छ । द मिररका अनुसार करीब पाँच वर्ष पहिले डेनिस नामका ती युवकलाई..
चराले जिउँदै खरायाे निलेपछि... (भिडियाे)
काठमाडौं, १७ असार । सीगल नामक चराले एउटा जिउँदै खरायाे आफ्नो चुच्चोले समातेर खाएकाे छ। वेल्सको स्कोखोल्म टापुमा सीगल नामक चराले सानो खरायोको टाउको आफ्नो चुच्चोले समातेर सिंगै खाएको हाे । जल तथा प्राकृतिक इतिहास फोटोग्राफर आइरिन मेन्डेज क्रुजले यो स्तब्ध बनाउने घटनाको भिडियो खिचेकी छन् । उनलाई टापुका वार्डेनहरूले सीगलहरूको शिकारी प्रवृत्तिका बारेमा बताएका थिए । साे भिडियाे निकै भाइरल बनेकाे छ। उक्त भिडियाेमा चराले..
सिनामङ्गलमा दुर्घटनाः १७ यात्रु घाइते, दुईको अवस्था गम्भीर
काठमाडौँ, १७ असार । काठमाडौँको सिनामङ्गलमा सवारी दुर्घटना हुँदा १७ यात्रु घाइते भएका छन् । आज बिहान गौशालाबाट कोटेश्वर जाँदै गरेको बा५ख ५१०० नंको माइक्रोबस र कोटेश्वरबाट गौशाला जाँदै गरेको बा१ज ९७६६ नंको बस एकापसमा ठोक्किँदा १७ यात्रु घाइते भएका हुन् । घाइतेमध्ये दुई गम्भीर रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविराज पौडेलले जानकारी दिए । घाइतेको सिनामङ्गलस्थित काठमाडौँ मेडिकल..
आफ्नो मोबाइल बन्द गर्नुहोस्, सित्तैमा पिज्जा खानुहोस् !
एजेन्सी, १६ असाेज । सुन्दा अनाैठाे लाग्न सक्छ तर, अमेरिकाकाे एउटा रेष्टुरेन्टले अनाैठाे अफर सार्वजनिक गरेकाे छ । हालै मात्र अमेरीकाकाे एउटा रेष्टुरेन्टले सित्तैमा पिज्जा खान पाइने अफर सार्वजनिक गरेकाे हाे। कहिले काहीँ कुनै रेष्टुरेन्टले यस्ता गज्जबका अफर ल्याउँदछन् कि सुन्दैमा मुखमा पानी भरिन्छ । उक्त रेष्टुरेन्टकाे अफर अनुसार उनीहरूले भनेकाे एउटा सानाे सर्त पूरा गरे उनीहरूले सित्तैमा पिज्जा दिनेछन्। उनीहरूले आफ्नाे रेष्टुरेन्टमा आएका ग्राहकहरूकाे माेबाइल..
काठमाडौँ, १६ असार । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–७ बाँसबारीमा आइतबार ६१ वर्षीया सावित्री भट्टराईको हत्या मृतककी छोरीको योजनानुसार भएको खुल्न आएको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो घटना दिउँसो हत्या गरिएकी भट्टराईकी छोरी ईश्वरीकै योजनाअनुसार भएको बताएको हो । प्रहरीले हत्यामा संलग्न सिरहा कल्याणपुर नगरपालिका–४ का मोहम्मद नौसाद, भारतीय अर्जुन कुमार भनिने भोला कुमार, भारतकै मोहम्मद रहिश र अभियुक्त..
नयाँ बसपार्कमा पनि ९० रोपनी जग्गा अतिक्रमण
काठमाडौँ, १६ असार । गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको १ सय ६५ मध्ये करिब ९० रोपनी जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अतिक्रमण भएको छ । उपत्यका भित्रिने/बाहिरिने बस पार्किङका लागि छुट्याइएको क्षेत्रमा होटल, वर्कसप, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक केन्द्र र पेट्रोल पम्प चलाइएका छन् । यातायात विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बसपार्कमा प्रयोजनअनुसार काम नभएको बताए । ‘उद्देश्य एउटा, प्रयोजन अर्कै भएको छ, बस पार्किङ गर्ने स्थान छैन,’..
बाघले यसरी लखेट्याे माेटरसाइकल चालकलाई (भिडियाे)
काठमाडौं, १५ असार । जङ्गलकाे बाटाे हुँदै माेटरसाइकलमा आफ्नाे गन्तव्य तिर गइरहेका एक माेटरसाइकल चालकलाई बाघले लखटेकाे छ। भारतको कर्नाटक तथा केरल राज्यको सिमानामा रहेको जंगलमा एक मोटरसाइकल चालकलाई बाघले लखेटेको हाे । भारतिय सञ्चार माध्यम आजतकमा यसको भिडियो समेत सार्वजनिक भएको छ। उक्त भिडियाे सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बनेकाे छ। मोटरसाइकल चालक तीव्र गतिमा जंगलको बीचमा बनेको राजमार्गमा हुँइकिरहेको बेलामा जंगलभित्र अचानक आएको बाघले लेखेटेको..
बालुवाखानीबाट बगेको लेदोले राजमार्ग दैनिक अवरुद्ध, व्यवसायीलाई मस्ती, यात्रुलाई सास्ती
काठमाडौँ, १५ असार । जब आकाश मडारिँदै पानी पर्न थाल्छ, बालुवासहितको लेदोले पृथ्वी राजमार्ग ठप्प हुन्छ। बैरेनीबजार जलमग्न हुन्छ, यात्रामा हिँडेका सवारीसाधनको लाम लाग्छ। मुख्य सडकबाट शाखा सडक हुँदै सञ्चालन गरिएको बालुवाखानीबाट बगेको लेदोले दैनिक राजमार्ग अवरुद्ध हुन थालेको छ। पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने धादिङको गल्छी गाउँपालिका–६ बैरेनीमा बालुवाखानीको लेदो सडकमा थुप्रिँदा पानी पर्ना साथ बजार जलमग्न हुन्छ भने सवारीसाधन घण्टौं जाममा..
धर्तिमातालाई पक्राउ गर्दा प्रहरी हवल्दार नै कापेपछि...
काठमाडौं, १३ असोज। आफुलाई धर्तिमाता बताउँदै आएकी विष्णु कुँवरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गुल्मी घर भई बुटवल बस्ने विष्णु कुँवरलाई आज विहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गत साता भद्रकाली मन्दिरमा एक किशोरीमाथि कुटपिट गरेपछि प्रहरी उक्त महिलाको खोजिमा थियो। शुक्रबार बिहान बालाजुबाट प्रहरीले कुँवरलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। कुँवरले युवतीमाथि कुटपिट गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। कुँवरले युवतीमाथि कुटपिट गर्दा हेरेर..
Results 604: You are at page7of 21